KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ ကရင်မျိုးဟေ့ တို့စရာ
သည်ခေါင်းစည်းက ၁၉၄၂ခုနှစ် ကရင်ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းက ဗမာတွေ ကရင်တွေကိုသတ်
ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ တုတ်၊ဓါး၊လှံ၊မှိန်း၊သေနတ် စတာတွေကိုင်ဆောင်ရင်း ဘယ်သံညာသံပေးပြီးကြုံးဝါးခဲ့
တဲ့ ဆောင်ပုဒ်ထဲက အစအနလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
ကြာခဲ့ပါပြီ အတော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုဆိုနှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ပါပြီ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံအပြောင်းအလဲတွေ အုပ်
စိုးသူဗမာအစိုးရ အဆက်ဆက်လက်ပြောင်းလက်လွှဲ လုပ်လာခဲ့တာကြောင့် ကျုပ်တို့ပြည်ထောင်စု ဗမာနိုင်
ငံကြီးလည်း လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်နေတဲ့အထိ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။
ဗမာစစ်အစိုးရ (မြန်မာအစိုးရ) အဆက်ဆက် ကရင်တွေအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားကတော့ မယိမ်းမ
ယိုင် ကျောက်စာတိုင်လိုခိုင်မြဲနေလျှက်ဆိုတာကိုတော့ ဒီကနေ့လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေသမျှအားလုံးဟာ ထင်
အဓိကရုဏ်းအတွင်း ဗမာတွေရဲ့ ကြွေးကျော်သံ အပြည့်အစုံကတော့
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆေးရိုးသည်က လာရှုတ်နေပြီလို့ ထင်
ကြမှာလား။ စကားကြီးစကားကျယ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဗမာပြည် (မြန်မာပြည်) ပြည်ထောင်စု မြန်
မာနိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် ပြည်ထောင်စု ဗမာနိုင်ငံ လို့ ခေါ်ဆိုသမုတ်နေတဲ့ ဒီကနေ့ ဗမာပြည်ထောင်စု သမ္မတ
နိုင်ငံတော်ကြီးကို တကယ်ငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ဆိုလျင် ဦးစွာပထမ ဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအစစ်
အမှန်ကိုမသိသမျှ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလုပ်ကြပါစေ ဘယ်သောအခါမျှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်း
မဆလ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ) ခေတ်။ န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး)
ခေတ်။ နအဖ (နိုင်ငံတော်ဧချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး)ခေတ်။ အဲဒီခေတ်တွေအတွင်း ရေးသား
ဖေါ်ထုတ်ထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေဟာ အမှန်အကန်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက် အဲဒီခေတ်အဲဒီအချိန်က
ဗမာအစိုးရလက်ထက် ပညာရေးစနစ်အတွင်း သင်ကြားထားသမျှ နားလည်ထားသမျှတွေဟာ သမိုင်းအ
မှားချည်းသက်သက်ပါလို့မပြောနိုင်လျင်တောင်မှ အမှားကင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ
ကိုတော့ ရှေးမီ နောက်မီ လူကြီး တွေအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ၊ ဗမာပြည်သူလူထုအားလုံး လက်ခံနိုင်တာတစ်ခုကတော့ ဗမာစစ်အစိုးရ ဆိုတာ လူ
လိမ်လူညာ လူမသမာတွေ ခေါင်းဆောင်မှုအများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်းကြီး တစ်
ဂိုဏ်း လက်နက်ကိုင်အကြီးစားဓါးပြဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းထက် မပိုဘူးဆိုတာကိုတော့ မဆလ ခေတ်ကနေ ဒီက
နေ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ(ဗမာစစ်အစိုးရ) မြန်မာအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အထင်အရှားကို သက်သေခံနေတယ်
ဆိုတာ မျက်စေ့ နား ရှိသူတိုင်း သိကြမှာပါ။
မဆလ ခေတ်ကနေစပြီး ဒီကနေ့အချိန်အထိ ဗမာစစ်တပ်ကြီးဟာ ဘာကြောင့် လူသတ်ဓါးပြဂိုဏ်းအဆင့်
အထိ နိမ့်ဆင်းလျော့ကျသွားရပါသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အာင်ဆန်း ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ဆိုတာ မိမိတိုင်း
ပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံခဲ့ကြပေမယ့်လို့ မဆလ ခေတ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ပျက်စီး
လာနေခဲ့လိုက်တာ သူခိုးဓါးပြ မုဒိန်းလူသတ်အဆင့်ထက် ပိုမတက်နိုင်တော့လောက်အောင် နိမ့်ဆင်းလျှော
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိရမယ်ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုအဆင့်အတန်းနဲ့စစ်တပ်
မျိုးကို ဘယ်မှာသွားသုံးမလဲ။ ပြည်ပရန်ကို ကာကွယ်ဘို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူကိုတောင်ပြန်ပြီး ဒုက္ခပေး
တဲ့စစ်တပ်မျိုး ဆိုမှတော့ မဆိုစကောင်းဆိုစကောင်း ပြည်ပက လာတိုက်ပြီဆိုလျင် ပြည်သူတွေက ဗမာ့
တပ်မတော်ကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဘို့နေနေသာသာ ပြည်ပက တပ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်အသတ်မခံရလျှင် ကံ
၁၉၄၂ခုမေလ ၁၂ရက်နေ့မှာ စောဖေသာ(စောဘဦးကြီး၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ) နဲ့မိသားစု ၉ယောက်အသတ်
ခံရလို့အပြီး ကရင်ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်တော့ ဗမာတွေက အပေါ်ကရေးပြခဲ့တဲ့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ က
ရင်မျိုးဟေ့ တို့စရာ ခွေးသားစားတဲ့ ကရင်တွေ မင်းတို့တတွေ ဒီပြည်တန်လားဆိုတဲ့ကြွေးကျော်သံတွေနဲ့
လူသတ်ပွဲကြီးဖြစ်လာတော့ ဒါဟာဟိုမရောက်သည်မရောက် သခင်ပေါက်စတွေရဲ့လုပ်ရပ်သာဖြစ်တယ်
ဆိုပြီး သမိုင်းအမှန်ကိုထိန်ချန်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီအချိန်တုန်းက လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးက ဆိုပါ
စောဘဦးကြီးလို လယ်မြေဧကထောင်ချီပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ ကရင်သူဌေးတွေဆိုတာ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်မှာ
နောက်ပြီး စပါးကျီတွေကို ချစ်တီးကုလားတွေက ကရင်ဒေသတွေမှာထားကြပါတယ်၊ ချစ်တီးကုလားတွေ
ရဲ့ စပါးကျီထဲကစပါးတွေဆိုတာ ဆင်းရဲသားလယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀၊ချွေး၊မျက်ရည်တွေနဲ့ ရင်းနှီးထားတဲ့စ
ပါး တနည်းအားဖြင့်ငွေတိုးချပြီး အကြွေးနဲ့သိမ်းပစ်တဲ့စပါးဆိုတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ ချစ်တီးကု
လားရဲ့ နာကျည်းစရာလုပ်ရပ်တွေကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြား အနည်းနဲ့အများဆိုသ
လို ဘာမျှမဆိုင်တဲ့ကရင်အမျိုးသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွါးကို တစထက်တစထိခိုက်လာရာကနေ ကရင်ဗမာအ
ဓိကရုဏ်း စခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းခံတွေထဲက ဒီအကြောင်းအရာကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ အ
အဲဒီကနေစလို့ ကရင်နဲ့ဗမာ သိပ်ပြီးတော့အစေးမကပ်ကြတာ ဒီကနေ့အထိပါပဲ။ ဗမာစစ်အုပ်စုက ကရင်မှန်
လျင် အစိပ်သားတောင်မချန်နဲ့ ဆိုတာတွေ၊ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်စေနဲ့ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
နောက်ဆုံး ကရင်တွေကို ပြတိုက်ထဲထည့်ပစ်မယ်ဆိုတာတွေက လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို လုပ်ပြနေတာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလတုန်းကပဲ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် နဘူးကျေးနယ်က ကရင်
တွေပိုင်တဲ့ လယ်မြေဧက ၁၀၀၀(တထောင်)ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းထားတဲ့အတွက် ကရင်အမယ်အိုက သူပိုင်
တဲ့မြေတွေထဲက တကွက်လောက်ပြန်ပေးပါလို့ တောင်းပန်ပြီးပြောတာကို တပ်ရင်းမှူးလုပ်တဲ့အရာရှိက
ဒီမြေတွေကို နိုင်ငံတော်ကပိုင်တယ် နိုင်ငံတော်မှာ လက်နက်ရှိတယ်၊ ငါက အာဏာရှိတယ် နင်တို့ကရင်
လူမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိဘူးလို့ပြောလွှတ်လိုက်တာကိုက ကရင်နဲ့ဗမာ အစေးမကပ်သေးဘူး
ဗမာစစ်တပ်က အဲဒီလိုအောက်တန်းကျလာရခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ မဟာဗမာ ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးဝင်နေမှုနဲ့ တိုင်း
ရင်းသားတွေကို အမျိုးဖြုတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့အတွေးအခေါ်ကြောင့်ဆိုတာသိသာလှပါတယ်။
ဗမာစစ်တပ် လို့ပြောတော့ ဗမာစစ်တပ်လို့ မပြောနဲ့ တပ်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးကွလို့ပြောမ
လား။ ဟုတ်ပါတယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပါပါတယ်၊ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ထက်မပိုပါဘူး။
ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရောက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်ဗိုလ်ဆိုတာကလည်း ဘော်စတွန် မာရသွန်ဗုံးခွဲတဲ့ ညီအစ်ကို
နှစ်ယောက်ထဲက အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် ဂျိုဟာဇနာရဖ် (Dzhokhar Tsarnaev) ဆိုတဲ့ချာ
တိတ်လို(Brian washed) ဦးဏှောက် အဆေးခံထားရတဲ့လူတွေချည်း သက်သက်ပါ။
ဗမာစစ်အစိုးရနဲ့ ကရင်တွေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ထားပုံကိုလည်း ကြည့်ပါဦး၊ မင်းတို့ဧဧဆေးဆေးနေ လယ်ယာ
ဥယျာဉ်ခြံ မြေ ကိစ္စတွေမှာ ဘာမျှဝင်မစွက်နဲ့ဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်
ဒါကြောင့် ရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာပြီဆိုလျင် ကရင်တွေက တယောက်နဲ့တယောက်ဗမာလာပြီ ဗမာ
လာပြီ လို့ အချင်းချင်းအော်ပြောရင်း ပြေးကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ စစ်ကြောင်းလာပြီလို့ မပြောကြပါဘူး။
ဒါကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့်စစ်တပ်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်ကွဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့ ချွေးသိပ်လို့မရနိုင်
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုမခံရသေးသမျှကာလပတ်လုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တခုက တိုင်းရင်းသားတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ သေရာပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်
တွေ နာကြင်ခံစားရမှုတွေ မသက်သာမပျောက်ကင်းသေးသရွေ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဘို့ဆိုတာ
ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာကို စစ်အုပ်စုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ အမျိုးသားရင်ကြား
စေ့ရေးလို့ ဆိုနေကြသူတွေ သဘောပေါက်နားလည် သတိပြုမိလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Published on Apr 23, 2013 Video click from Karen Internally Displaced People, Burma Solider, Villager unhappy about Italian-Thai EA in Kaw Htee lor 2, Company land confiscation in Noh Pa Doh. Source Audio from RFA (Burmese) BBC (Burmese) and Radio Kamar Yook.
သက်ဆိုင်တဲ့ မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းယူခြင်းမပြုပဲ ကူးယူမိတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းခြင်း
ကြီးစွာဖြစ်ရသလို မီဒီယာဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီမှာကိုလည်း အထူးစိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာ တောင်းဘို့လိုအပ်မယ်ဆိုလျင်ဖြင့် မူရင်းပိုင်ရှင်များအနေနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး